Army sifihle yengubo
Army ihlathi elikhulu sifihle ilaphu
Army entlango sifihle ilaphu
Army gray sifihle ilaphu
Army snow sifihle ilaphu
Navy sifihle yengubo
Navy ihlathi elikhulu sifihle ilaphu
Navy sifihle yengubo zaselwandle
Airforce sifihle yengubo
amandla Armed sifihle ilaphu
Umda unogada sifihle ilaphu
Style New sifihle ilaphu
Uniform & nezingubo ilaphu
Twill / ukuzama / Sateen ilaphu
okwakha వెర్షనింగ్ uBhalo
Oxford / Cordura ilaphu
Poplin / shirt ilaphu
iyunifomu Prison yengubo
Military / iyunifomu Police
iyunifomu sifihle Military
nebrukhwe Military / Police
ibhatyi Police / Uniform
Iibhutsi Military / Shoes
Shaoxing Baite Textile CO., LTD ise-Shaoxing -a kwihlabathi isixeko yayidume nemiqhaphu, China, kujoliswe ekwenzeni ezahlukeneyo amalaphu zomkhosi iiyunifom ukuya Army, amapolisa kunye namaSebe kaRhulumente yakuMbindi Mpuma, eRashiya, eYurophu, mpuma Asia, Merika nase-Afrika.
Yintoni singenza ntoni:
Thina kweminyaka engama-10 amava emkhosini kunye nezingubo kushishino zokhuseleko kwakunye nolwazi iimveliso olunzulu kuzo zonke izinto sinaso. Ngoko ke, siya ekunikezeni iimveliso ezisemgangathweni kunye nesevisi yabathengi efundisayo ekwandiseni ulwazi lwakho koko siya kubonelela kunye neemveliso zakho safety.Our eyakho zahlukahlukene kwaye zahlukene, nto leyo kuquka amalaphu ukuzifihla, amalaphu iyunifomu yoboya amalaphu nezingubo, iiyunifomu zomkhosi, ukulwa ibhanti, ikepusi, iibhutsi, T-shirt kunye iibhatyi.
Kutheni ukhetha nathi:
Uqinisekiso lobulunga - mveliso yethu waqalisa bokudaya phambili kunye nezixhobo wokushicilela, iilebhu bayo kunye namagcisa esweni zonke inyathelo lwemveliso ngexesha lenene, isebe QC wenza behlola yokugqibela, nto leyo ukugcina iimveliso zethu zisoloko wadlula iimfuno zovavanyo avela Countries ezahlukeneyo ' Army.
Ixabiso inzuzo - inkampani yethu ise Shaoxing, kwihlabathi isixeko idume textile.There baninzi kakhulu greige ngelaphu kunye bokudaya mveliso apha, singakwazi ukufumana ixabiso ibiza ukusuka izinto zokwenza iimveliso igqityiwe.
Intlawulo bhetyebhetye - ngaphandle T / T kunye L / C intlawulo, senza kwakhona kube esamkela intlawulo ekwizinga Assurance Urhwebo ngokusebenzisa Alibaba.It unako ukukhusela ukhuseleko mali umthengi lowo.
Traffic lula - isixeko yethu kufutshane kakhulu Ningbo kunye Shanghai kwizibuko, nayo abasondelayo Hangzhou moya, nto leyo ukuqinisekisa ukuziswa impahla yokugcina umthengi lixakekileyo kunye nexesha.
Sihlala unamathela umoya "Umgangatho kuqala, Efficiency kuqala, Service kuqala" ukususela ekuqaleni ukuya end.We ngokunyanisekileyo ndamkele utyelelo kunye yophando kuzo zonke umxumi ehlabathini.
NO.910-911, Caizhi nkqubo isisakhiwokazi, Deartown, Shaoxing City, Zhejiang kwiPhondo, China